DEGDEG: Buuq iyo Fowdo hareeyay Baarlamaanka iyo xukuumadii Kheyre oo kalsoonida lagala... - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
BaarlamaankaBREAKING NEWSMooshin CusubXukuumadda
War hadda soo dhacay ayaa sheegayai n xaalad kacsan oo fowdo ah ay hareysay Fadhigii Baarlamaanka Federaalka ee maanta.
Arrintan ayaa timid kadib markii ay buuq Golaha ka sameeyeen Wasiirada xukuumadda Soomaaliya ee ka mida xildhibaanada Baarlamaanka oo diidaanaa qaabka shir-guddoonka u wado Baarlamaanka iyo ajendaha Doorashada ee horyaalla.
Wasiirada xildhibaannada ah ayaa la wareegay Hoolka shirka ee xarunta Villa Hargeysa, waxaana buuq iyo fowdo kadib guddoonka Baarlamaanka uu shaaciyey in cod loo qaaday kalsoonida xukuumadda Ra’iisal wasaare Kheyre, wuxuuna Guddoomiye Mursal ku dhawaaqay in Baarlamaanka uu kalsoonidii kala noqday oo sidaasi ay ku dhacday.
Previous articleIs-diiwaangelinta Deeqdii waxbarasho Hormuud Telecom 2020 oo saacad gudaheed ku xirantay
Next articleDEGDEG: Guddoomiye Mursal oo ku dhawaaqay in la riday xukuumadii Xasan Cali Kheyre